Diyo post :: को हुन गाउँ गाउँ बाट उठ..... का गीतकार ? किन ओझेलमा परे ? को हुन गाउँ गाउँ बाट उठ..... का गीतकार ? किन ओझेलमा परे ? - Diyo post
गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती–बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ ।’ आमनेपालीमाझ प्रिय छ, यो गीत । जब–जब देशले परिवर्तन खोज्छ, तब परिवर्तनकामीका कण्ठबाट यो गीत स्वस्फूर्त गुनगुनिन थाल्छ । ०३६ र ०४६ को होस् या ०६२–६३ को जनआन्दोलन, गाउँ–गाउँ र बस्ती–बस्तीबाट जनता जगाउन यो गीतले कुनै राजनीतिक दलले भन्दा कमजोर भूमिका खेलेन । ०३३–३४ तिरबाटै यो गीत चर्चामा छायो, तर गीतकार सधैँ गुमनाम । श्याम तमोट यो गीतका लेखक हुन् भन्ने जानकारी अधिकांशले ०६३ तिर मात्रै पाए । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि नयाँ राष्ट्रिय गानको खोजी हुँदा यो गीत पनि प्रस्ताव गरियो । जे होस्, राष्ट्रिय गानमा छनोट नभए पनि राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा यो गीतले पहिलो स्थान लिँदै आएको छ । आखिर यो चर्चित गीत लेखियो कसरी ? मञ्जुल र रामेशहरूसम्म आइपुग्यो कसरी ? गीत गाउनेहरू चर्चामा रहे, तर लेख्ने किन गुमनाम भए ? नयाँ पत्रिकाका प्रवीण देवकोटाका जिज्ञासा गीतकार श्याम तमोटले यसरी मेटाए :